ချစ်ခင်ရပါသောစီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ၊ မကြာသေးမီကကုမ္ပဏီ၏အမည်နှင့်လိပ်စာကိုတရားမဝင်အသုံးပြုသောကုမ္ပဏီများနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည် (Shijiazhuang Mets Machinery Co. , Ltd အမှတ် ၁ Changjiang လမ်း Shijiazhuang 050035 Hebei China Tel: 86-311-68058177 ) နှင့်အခြားကုမ္ပဏီ ...ပိုပြီးဖတ်ပါ »
အဖွဲ့မှဆုချီးမြှင့်ခြင်းနည်းပညာဌာနမှလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအားနည်းပညာအဖွဲ့၏ဆုကိုချီးမြှင့်ခြင်းအတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ပိုပြီးဖတ်ပါ »
နွေ ဦး ရာသီရောက်လာပြီ၊ ပျော်စရာအချိန်ရောက်ပြီ!
နွေ ဦး ရာသီရောက်လာပြီ၊ ပျော်စရာအချိန်ရောက်ပြီ! ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအားလုံး jianhua လမ်းနှင့်မြောက်ဘက်ဒုတိယလမ်းမလမ်းဆုံတွင်စုရုံးခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ဘီးစီးတဲ့လမ်းကြောင်းကစုဆောင်းတဲ့နေရာ - Hutuo River-Zhengding South Gate - Retrace ကိုလူတိုင်းနဲ့အတူခြေလှမ်းတွေလှမ်းခဲ့တယ်။ ငါတို့ကအီး ...ပိုပြီးဖတ်ပါ »
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသဘောတရားကိုစွဲကိုင်ထားသည်။ မကြာသေးမီကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအခြေအနေသည်ဆိုးရွားလာပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်အပြုသဘောဖြင့်တုံ့ပြန်ပြီးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးထုတ်လုပ်မှုကိုလုပ်ဆောင်သည်။ ၁။ ခေတ်မမှီသောပစ္စည်းများကိုဖယ်ရှားပြီးအဆင့်မြင့်သောအရာများကိုမိတ်ဆက်ပါ။ပိုပြီးဖတ်ပါ »
ငါတို့ကုမ္ပဏီ၏နှစ်ဆအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို ardently ။
Hebei Hanchang Minerals Co. , Ltd သည်စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်၊ ၂၀၁၇ တွင် ISO9001 အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၊ OHSAS18001 လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်အမျိုးမျိုးသောစီမံခန့်ခွဲမှုပေါင်းစည်းခြင်းတွင်နိုင်ငံတကာအဆင့်သို့ရောက်ရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။ပိုပြီးဖတ်ပါ »
slurry pump ကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ။
slurries ကိုကိုင်တွယ်ရာတွင်အသုံးပြုသူများသည်သူတို့၏ slurry pump အတွက်ရာဘာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသို့မဟုတ်သတ္တုတည်ဆောက်မှုအကြားတွင်မကြာခဏရွေးချယ်ရမည်။ ဤဆောင်းပါးသည်ဤ slurry pump pump ပုံစံနှစ်ခုလုံးကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အပေးအယူများနှင့်ကန့်သတ်ချက်များကိုဖော်ပြထားသည်။ ဤဆောင်းပါး၏နိဂုံးမှာဇယား 1 prov ...ပိုပြီးဖတ်ပါ »
တစ် ဦး slurry စုပ်စက်၏အစိတ်အပိုင်းများ
Impeller impeller elastomer သို့မဟုတ် high-chrome ပစ္စည်းသည်အဓိကလည်ပတ်နေသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီးပုံမှန်အားဖြင့် centrifugal force ကိုအရည်သို့အရည်သို့ပေးသည်။ Casing Split ၏အပြင်ဘက်အဖုံး၏ ၀ တ္ထုများသည် wear liners များပါ ၀ င်ပြီးမြင့်မားသောလုပ်ဆောင်မှုဖိအားစွမ်းရည်ကိုပေးသည်။ အဆိုပါထည် ...ပိုပြီးဖတ်ပါ »
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသို့လာရောက်လည်ပတ်သောနိုင်ငံခြားဖောက်သည်များကိုကြိုဆိုပါ။ ပိုပြီးဖတ်ပါ »
၁.၁ pump စက်ရုံသည်သမိုင်းကြောင်းရှည်လျားသည်။ စုပ်စက်သည်စက်ဟောင်းဖြစ်သည်။ ဥရောပနိုင်ငံများမှ ၂၀ ရာစုအလယ်ပိုင်းတွင်ပထမဆုံးနှုန်းထားစက်ရုံကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ၁၉၈၀ တွင် United States Wortington ကုမ္ပဏီကဲ့သို့သော ၁၀ ခုကျော်၊ Ingersoll Rand-the company ကို ၁၈၆၀ တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်၊ Byron-Jackson comp ...ပိုပြီးဖတ်ပါ »
ဘယ်လို centrifugal slurry စုပ်စက်အလုပ်လုပ်သလဲ
ပန့်အများစုသည် centrifugal pump သည်စက်မှစွမ်းအင်ကိုမော်တာမှရွေ့လျားနေသောအရည်၏စွမ်းအင်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးသည်။ စွမ်းအင်အချို့သည်ရွေ့လျားမှု၏ရွေ့လျားစွမ်းအင်အဖြစ်သို့ရောက်သွားပြီးအချို့သောစွမ်းအင်များသည်ဖိအားများမှကိုယ်စားပြုခြင်း (သို့) မြေထုဆွဲအားကိုမြင့်မားသောအဆင့်သို့ဆွဲတင်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်စားပြုသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်ပိုပြီးဖတ်ပါ »